Bluetooth ​နဲ့ ​အင်​တာ​နက် ​ဘယ်​လို​ချိတ်​မ​လဲ . ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ဇေ​ယျာ​အေး : ... ​ကျ​နော်​ဟာ​တော့ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး ​သူ​ငယ်​ချင်း​တစ်​ယောက်​ကို ​ကူ​ညီ​လုပ်​ပေး ​မ​လို​ပါ .. ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ရေbluetooth ​နဲ့​အင်​တာ​နက် ​သွယ်​တာ. ​အ​ကို ​ရေး​ထား​တာ bluetooth ​နဲ့​သွယ်​တာ ​မ​ဟုတ်​လား.. ​အဲ​ဒီ​ထဲ​က ​ဖုန်​နံ​ပတ်​နေ​ရာ ​အ​ကွက်​မှာ **99***1# ​အဲ​တာ​က ​ဖုန်း​နံ​ပတ်​နဲ့၁​နဲ့​နောက်​က ​ဟာ​နဲ့​မ​ဟုတ်​လား .. 99 ​တွေ​မ​ပါ​ဘူး​မ​ဟုတ်​လာ..​ကျ​နော်​က ​တုံး​လို​ပါ..
​နောက်​ထပ် ​ညီ​လေး​တစ်​ယောက်​လဲ ​တောင်း​ဆို​ထား​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော် ​အောက်​မှာ ​ရှင်း​ပြ​ထား​ပါ​တယ် . ​ဒါ​က ​ထိုင်း​ဖုန်း​အ​တွက်​ပါ ..
(1) bluetooth ​နဲ့ ​ချိတ်​နည်း
(2) ​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ usb ​ထိုး​ပြီး Dial up connection ​အ​နေ​ဖြင့် Direct ​ချိတ်​ဆက်​နည်း .
(1) Bluetooth ​နဲ့ ​အင်​တာ​နက် ​ချိတ်​ဆက်​နည်း
​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​ကို​သုံး​မယ့် ​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ bluetooth ​တပ်​ထား​ပါ .
Bluetooth ​အ​တွက် ​ကို​သုံး​မယ့် bluetooth ​ရဲ့ Driver ​ကို ​တင်​ထား​ဖို့​လဲ​လို​ပါ​တယ် . bluetooth ​ဝယ်​တိုင်း ​ပါ​လာ​တဲ့ CD ​ကို ​ဆို​လို​တာ​ပါ . ​အဲ့​ဒီ့ CD ​ကို install ​လုပ်​ထား​ဖို့​လဲ ​လို​ပါ​တယ် .
​တင်​ပြီး​သွား​ပြီ​ဆို​ရင်​တော့ ​အောက်​က ​အ​ဆင့်​တွေ​အ​တိုင်း ​လုပ်​သွား​လိုက်​ပါ .
start menu bar ​က bluetooth ​လေး​ကို ​နှိပ်​ပြီး ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ . ​ဘယ်​နေ​ရာ​မှာ​ပဲ bluetooth icon ​လေး​ရှိ​ရှိ​ပါ . ​အ​ဓိ​က​က ​ဖွင့်​လိုက်​ဖို့​ပါ​ပဲ .
Add ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ ..
​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ကျွန်​တော်​တို့​က bluetooth ​နဲ့ ​ကွန်​ပျူ​တာ ​ချိတ်​ဆက်​မှု​ရှိ​ဖို့​အ​တွက် ​အောက်​မှာ​ပြ​ထား​သ​လို​မျိုး code number ​ရိုက်​ထည့်​လိုက်​ပါ . ​ဒါ​က ​ချိတ်​ဆက်​မယ့် ​သ​င်္က​တေ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် bluetooth ​မှာ nyinaymin ​လို့ ​ရိုက်​ထည့်​မယ်​ဆို​ရင် ​ဖုန်း​မှာ​လဲ nyinaymin ​လို့​ရိုက်​ထည့်​ရ​မှာ​ပါ . ​ကျွန်​တော်​က ​ဥ​မာ​ပြော​တာ​ပါ . ​ကျွန်​တော်​တို့​ရိုက်​ထည့်​ရင်​တော့ ​နံ​ပါတ်​ကို​ပဲ ​ရိုက်​ထည့်​ပါ . ​သူ​တို့​ဂ​ဏန်း​နှစ်​ခု ​တူ​ဖို့​ပဲ ​အ​ရေး​ကြီး​တာ​ပါ . ​ရိုက်​ချင်​တာ​ရိုက် . ​ပြီး​ပြီ​ဆို​တာ​နဲ့ ​ချိတ်​ဆက်​မိ​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ် ..
​ကဲ ​ပ​ထ​မ​အ​ဆင့်​ပြီး​သွား​ပြီ​ဆို​ရင် ​ဒု​တိ​ယ​အ​ဆင့်​လာ​မယ် ..
​ဒု​တိ​ယ​အ​ဆင့်​က​တော့ ​ကျွန်​တော်​တို့ bluetooth ​နဲ့ ​ကွန်​ပျူ​တာ ​ချိတ်​ဆက်​မိ​သွား​ပြီ​ဆို​ရင် ​ကျွန်​တော်​တို့​အ​နေ​နဲ့ Dial up connection ​အ​တွက် ​ပြင်​ဆင်​စ​ရာ​ရှိ​တာ ​ပြင်​ဆင်​ရ​တော့​မယ် . ​အဲ့​ဒီ့​ပြင်​ဆင်​ဖို့​အ​တွက် ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​တယ် ​ဆို​တာ​ကို ​ဒီ​မှာ ​ရေး​ပေး​ထား​ပြီး​သား​ပါ ...
​ကို​ဇေ​ယျာ​အေး​ကို​လဲ ​ပြော​ချင်​တာ​က ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ချိတ်​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ ​ကု​မ္န​ဏီ​က ​ဖုန်း​လိုင်း​ကို ​အ​သုံး​ပြု​ပြီး ​အင်​တာ​နက်​ချိတ်​တာ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် ​ကု​မ္န​ဏီ​က ​သတ်​မှတ်​ထား​တဲ့ ​ဖုန်း​နံ​ပါတ်​ကို​တော့ ​ရိုက်​ထည့်​ပေး​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ် . 12 call ​ဆို​ရင်​တော့ *99***1# (or) *99***2# (or)*99***3# ​တစ်​ခု​ခု ​ရိုက်​ထည့်​ရ​ပါ​တယ် . Dtac ​ဆို​ရင်​တော့ *777*1# ​လား​မ​သိ​ဘူး Dtac ​တော့ ​မ​မှတ်​မိ​တော့​ဘူး . ​ကျွန်​တော်​က​တော့ ​အင်​တာ​နက်​သုံး​မယ်​ဆို 12call ​ပဲ ​သုံး​တယ် . *99***1# ​ဆို​တာ​က ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ဖုန်း​ရဲ့ ​နံ​ပါတ်​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး . ​ဖုန်း​ကို modem ​အ​နေ​နဲ့ ​အ​သုံး​ပြု​ဖို့​အ​တွက် ​ကု​မ္န​ဏီ​က ​ပေး​ထား​တဲ့ ​ကုတ်​ပါ . ​တစ်​ကယ်​ဖုန်း​နံ​ပါတ်​ကို ​ရိုက်​ထည့်​ရ​မှာ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး . password ​က​တော့ ​မ​ပေး​လဲ ​ကိ​စ္စ​မ​ရှိ​ဘူး . ​အ​ဓိ​က​က *99***1# ​ရိုက်​ထည့်​ဖို့​ပဲ . ​အဲ့​ဒါ​လေး ​သ​တိ​ထား​ပေး​ပါ ..
​ဖုန်း​မှာ ​အင်​တာ​နက်​သုံး​ဖို့ ​နာ​ရီ ​မ​ဝယ်​တတ်​ရင် ​ဒီ​မှာ ​ရေး​ပေး​ထား​ပါ​တယ် ..
​နောက်​တစ်​နည်း​က​တော့ ​ဖုန်း​ကို USB port ​ထိုး​ထား​ပြီး​ကွန်​ပျူ​တာ​နဲ့ ​ချိတ်​ဆက်​ကာ ​အင်​တာ​နက် ​ကို Direct ​သုံး​တဲ့​နည်း​ပါ . ​အဲ့​ဒီ့​နည်း​အ​တွက်​တော့ ​ကို​သုံး​မယ့် ​ဖုန်း​ရဲ့ modem ​ကို​တော့ install ​လုပ်​ထား​ဖို့​လို​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော့်​ရုံး​ခန်း​မှာ​က ​အင်​တာ​နက်​ကို 24 ​နာ​ရီ​ရ​ပါ​တယ် . ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ကျွန်​တော့် ​အ​ခန်း​ကို​ရောက်​ရင်​တော့ wireless ​မ​မိ​တော့ ​ဖုန်း​နဲ့ ​ချိတ်​ပြီး​သုံး​ရ​တယ် . Nokia 5300 ​နဲ့ ​ချိတ်​နေ​ပါ​တယ် . ​ဖုန်း​ချိတ်​တာ ​အ​ကောင်း​ဆုံး​လို့ ​ကျွန်​တော်​ထင်​တာ​က​တော့ nokia ​တွေ​ပါ . ​အ​ကြမ်း​ခံ​သ​လို . ​လိုင်း​အား​လဲ ​အ​တော်​ကောင်း​တာ​ကို ​တွေ့​ရ​ပါ​တယ် . Nokia ​တွေ​ကို ​ကြိုး​နဲ့ Direct ​ချိတ်​ပြီး​သုံး​မယ်​ဆို​ရင်​တော့ Nokia pc suite ​ကို Download ​လုပ်​ပြီး install ​လုပ်​ထား​ဖို့​လို​ပါ​တယ် . ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​အောက်​က ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း​လုပ်​လိုက်​ပါ .
(၁) Nokia pc suite ​ကို ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ ..
(၂) ​အဲ့​မှာ​ဆို ​ကျွန်​တော်​တို့ bluetooth ​နဲ့ ​ချိတ်​မှာ​လား USB modem ​အ​နေ​နဲ့​သုံး​မှာ​လား​ဆို​တာ ​မေး​ပါ​လိမ့်​မယ်
(၃) bluetooth ​က​နော့ ​ကြိုး​မဲ့ (​ကြိုး​မ​လို) ၊ USB modem ​က​တော့ ​ကြိုး​ထိုး​ပြီး​သုံး​တာ (​ကြိုး​လို)
(၄) ​ကို​သုံး​ချင်​တာ​ကို​ရွေး​ပြီး Next ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ .
(၅) ​အ​ခု​ဆို​ရင် ​ကွန်​ပျူ​တာ​နဲ့ ​ဖုန်း​နဲ့ ​ချိတ်​ဆက်​မိ​နေ​ပါ​ပြီ . ​နောက်​တစ်​နည်း​ပဲ​ကျန်​ပါ​တော့​တယ် . ​အဲ့​ဒါ​က​တော့
(၆) ​ချိတ်​ဆက်​ပြီး​သုံး​ဖို့ ​ပြင်​ဆင်​ရ​တော့​မှာ​ပါ . ​ဒီ​က ​နည်း​အ​တိုင်း ​ဆက်​လုပ်​လိုက်​ပါ ..
nann October 5, 2009 at 10:12 PM
​အ​ကို​ရေ ​အဲ​ဒါ ​ဘယ်​လောက်​အ​ကွာ​အ​ဝေး​ထိ ​မိ​လဲ​မ​သိ​ဘူး​နော်။